Itoobiya ayaa u aqoonsatay Golaha Sare ee Arrimaha Islaamka inuu yahay Hay’ad diimeed oo… – Hagaag.com
Itoobiya ayaa u aqoonsatay Golaha Sare ee Arrimaha Islaamka inuu yahay Hay’ad diimeed oo…
Posted on 29 Luulyo 2020 by Admin in World // 0 Comments
Barlamaanka Itoobiya ayaa wuxuu siiyay Golaha Sare ee Arimaha Islaamka aqoonsi sharciyeeed oo ku noqday hay’ad diimeed oo madaxbanaan kadib markii sanado badan uu ka mid ahaa ururada bulshada.
Xaaladda cusubi waxay u oggolaanaysaa Goluhu inuu dejiyo sharciyo la xiriira arrimaha Muslimka, inuu abuuro hay’ado xiriir la leh oo abaabula xiriirka caalamiga ah, iyo sidoo kale madaxbanaani buuxda oo ku saabsan faragalin kasta oo arrimaheeda ah.
Maamulka caasimada, Addis Ababa, wuxuu siiyay Golaha Sare ee Arimaha Islaamka dhul ku yaalla meel istiraatiiji ah oo ku dhow xarunta Midowga Afrika, dhul lagu qiyaasay 30,000 mitir oo laba jibbaaran oo loo qoondeyn doono in lagu dhiso xarun Islaami ah oo noqon doonta tan ugu weyn Afrika, si loo waafajiyo doorka Itoobiya ee taariikhda Islaamka.
Sheikh Muhammad Zeno, imaamka iyo aasaasaha Masjidka Abdullah Bin Cabbaas ayaa yidhi “tan iyo markii la aasaasay Masjidka sannooyin ka hor anigoo barayay Qur’aanka caruurta xaafada, mar walba waxaan dooneynay inaan Masjidka ballaarino si uu u noqdo mid u qalma Muslimiinta, laakin waxaa sidaasi naga horjoogsanayey ruqsad la’aan”.
“Maanta waxaan dareemayaa dareen sharaf iyo farxad leh kadib markii aan helnay sharciga lahaanshaha, kaas oo ahaa wixii aan ka fileynay xilliyadi xukuumadihii hore,” ayuu raaciyay.
Muftiga weyn ee Itoobiya, Sheekh Haj Cumar Idiris, ayaa sheegay in Muslimiintu ay dalbanayeen xuquuqdooda muddo tobanaan sano ah, waxayna mudneyd in xukuumadaha ay dammaanad qaadaan xuquuqdaasi iyagoo fulinaya mabda’a cadaaladda iyo sinnaanta.
“Waxaan ka mahadcelineynaa dadaalka dowladda haatan jirta doorkeeda adag ee ku aadan kor u qaadida mabda’a xuquuqda Muslimiinta, tanina waa ka dhabeynta ballanqaadkooda, waana in loogu mahad celiyaa, waana mid ku timid mahada Eebbe … Xaaladda waxay isu beddeshay sidii aan rajeynaynay, baaqayaga ahaa in la furo bangiyo Islaami ah ayaa la fuliyay, goluhuna waa la aqoonsaday, taasoo fursad weyn u ah bulshada Muslimiintu inay u shaqeeyaan danta guud. “